Fepetra noho ny hamehana :: Miato avokoa ny fampiharana an'ireo didin'ny HCC • AoRaha
Fepetra noho ny hamehana Miato avokoa ny fampiharana an’ireo didin’ny HCC
Miandry ny fivoaran’ny toe-draharaha manodidina ny fivoaran’ny fiatrehana ny aretina « coronavirus » ny fanatanterahana an’ireo fanapahana noraisin’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC). « Miato avokoa aloha ny fampiharana an’ireny fanapahana ireny. Ao anatin’ny vanim-potoana manokana isika izao, ka miandry an’izay fivoaran’ny raharaha ny famerenana amin’ ny laoniny ny fampandehanan-draharaha eto amin’ny tany sy ny fanjakana», hoy ny Filohan’ny HCC, Rakotoarisoa Jean Éric, omaly, tamin’ny antso an-tariby.
Nomarihiny fa « samy mitsahatra amin’ny asany ny ankamaroan’ireo andrimpanjakana ankehitriny ». « Ao anatin’izany koa izahay eto amin’ny HCC », hoy izy. Isan’ny fanapahana faramparany navoakan’ity andrim-panjakana ity ny fandidiana an’ireo depiote eo anivon’ny Antenimierampirenena hiroso amin’ny fifidianana izay ho solontenan’izy ireo ao amin’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (CENI).
Noferan’ny HCC ho tanterahina hatramin’ny faran’ ity volana marsa ity ny fifidianana an’izay olona haka ny toeran’ny filoha lefitra teo aloha, Rakotonarivo Thierry. « Satria tsy mbola afaka mivory ny parlemanta dia miandry izany isika », hoy ihany ny fanampim-panazavan’ny Filohan’ny HCC.
Fiandrasana volana mey
Mialoha ny fampiharana ny fepetra fahamehana arapahasalamana noraisin’ny fitondram-panjakana no efa nivonona ny hanatanteraka fivoriana tsy ara-potoana hifidianana an’io solontenan’izy ireo ao amin’ny CENI io ireo solombavambahoaka. Teo ihany koa ny fiomankomanan’ny governemanta tamin’ny fananganana an’ilay Vaomiera manokana iraisan’ireo depiote sy ny loholona handinika ny fandaniana na tsia ireo hitsivolana telo noraisin’ny Filoham-pirenena, izay tsy nolanian’ireo loholona.
Nambaran’ny depiote Keron Idéalson tamin’izany fa »antoka iray hahafahana miroso haingana any amin’ny fampandehanan-draharaham-panjakana ny fandaniana an’ireo hitsivolana ireo, dia ny momba ny fifidianana amin’ny ankapobeny sy ny fametrahana ny lamina vaovao hitondrana ny Antenimierandoholona ary ny lalàna hifehy ny harena an-kibon’ny tany. Araka izany, mety mbola hiandry ny fivoriana arapotoanan’ny parlemanta, amin’ny fiandohan’ny volana mey 2020 izao, ny fankatoavana an’ireo hitsivolana ireo.
Fihibohana fiarovana :: Manipy teny amin’ny fanajana fitsipika i Nicolas Dupuis
Fanohanana mpamily :: Voakiana ny fandaminana napetraky ny kaominina Antananarivo renivohitra